Author: Dukinos Kenris
Labada xaaladoodba waa in uu Madaxweynuhu ka talo qaataa sharciyaqaan.
Golaha Deegaanka degmo kasta wuxuu maamulaa hantida iyo dakhli kasta oo gacantooda soo gala, pumtland xisaab-celin tifaftiran u gudbiyaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Awoodaha iyo xilalka Maxkamadda Sare waxaa ka mid ah awoodaha iyo xilalka kale ee uu sharcigu banneynayo.
Waxaa waajib ah in si toos ah loogu akhriyo degganaha amarka Garsooraha inta aan lagu dhaqaaqin baarista, baarahana waxaa ka reebban ku xad-gudubka sharciga. Dhammaan dadweynaha Puntland waxaa waajib ku ah daryeelka iyo dhawridda hantida Dawladda. Dastuurka ayaa dammaanad qaadaya xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Waxaa reebban phntland guddiga gaarka ah loo adeegsado wax ka beddelidda Dastuurka ee ka baxsan iswaafajinta Dastuurka federaalka iyo kan Puntland.
Golaha Wakiilada ayaa ansaxinaya magacaabistiisa iyo ruqseyntiisaba.
Sidoo kale xisbiyadu waa inay goob joog ka ahaadaan soo xeraynta sanduuqyada codbixinta iyo tirinta codadka. Guddiga Doorashada Puntland waa inuu hubiyo inaan shakhsiyaad isku siyaasad ahi yeelan aqlabiyadda gacan ku haynta maamulidda hawlaha doorashooyinka.
Faafreeb horudhac ahi waa reebban yahay.
Habka siyaasadeed ee Dawladda Puntland wuxuu ku saleysan yahay mabaadiida hogaamineed ee: Dastuugka kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu doorto shaqada iyo loo shaqeeyaha uu doorbido. Xorriyadda wax soo saarku way bannaan tahay, waxaase shardi u ah in wax soo saarayaashu ay oofiyaan shuruudaha sharci iyo maamul ee dalka u degsan.
Madaxweynuhu wuxuu soo saaraa xeer xaalad degdeg ah si uu uga hortago dhibaatooyinka ciribdambeed-xumadu ka dhalan karto, sida:. Eedaysanaha laguma khasbi karo qirashada dembiga loo haysto. Qofka maxbuuska ahi waxa uu xaq u leeyahay daryeel caafimaad, cunto iyo waxbarasho. Duqa degmad iyo Ku-Xigeenkiisa lama xiri karo lamana baari karo jirkooda, deegaankooda iyo gaadiidkooda ay markaas dasruurka, haddii aan Golaha Deegaanku 20112 codsi xasaanad ka qaadis ah oo uu soo gudbiyey Xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud ama aan lagu qaban isagoo faraha kula jira fal-dambiyeed culus.
Sharci gaar ah ayaa tilmaami doona wakhtiga iyo habraaca tirakoobka. Maxkamadda Dastuuriga ah ayaa ilaalinaysa inaan qofna xaquuqdiisa lagu xad gudbin, sharci gaar ah ayaana qeexaya sida Maxkamadda Dastuuriga ay u gudanayso xilkaas.
Dawladda Puntland waxay yeelaneysaa Maxkamad Dastuuriga ah, garsoorayaasheeduna waxa ay ka koobnaanayaan garsoorayaasha Maxkamadda Sare oo lagu kordhiyo afar 4 garsoore oo bulshada laga soo dhex xulay. Madaxweynaha, Madaxweyne ku-xigeenka, xubnaha Golaha Wasiirrada iyo saraakiisha sarsare ee Xukuumaddu waa in ay hantidooda qoraal ugu caddeeyaan Hantidhawraha Guud ee Dawladda, bisha ugu horreysa oo ay xilalka la wareegaan.
Dhammaan Xisbiyada siyasadda ee doorashooyinka ka qaybgelaya waa inay fursad siman u leeyihiin warbaahinta Dawladda marka lagu jiro ololayaasha doorashooyinka. In uu ogolaado xisaab-xirka miisaaniyad-sanadeedkii hore ee uu soo bandhigay Hanti- Dhawrka Guud, isla markaana u gudbiyo Xukuumadda talooyin ama dib u habeyn la xiriirta shuruucda arrintaas quseysa.
Arbaco, Abriil 18, HOL — Wararka laga helayo degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in nin hubeysan uu saakay ku dillay gudaha degmada labo ruux oo ka tirsan dadka degmadaas ku nool.
Qofka ay maxkamadi xukuntay oo xiran waxa uu xaq u leeyahay ilaalinta nabadgelyadiisa iyo sharaftiisa aadaminnimo. Fadhiyada Golaha waxaa la horgeeyaa arrimaha ay isku soo raaceen guddi-hoosaadka ay khuseyso.
Ilmuhu waxa uu xaq u leeyahay nolol, magac, jinsiyad, korriimo, waxbarasho iyo daryeel caafimaad. Haddii dalka ay la soo gudboonaadaan xaalado dagaal, aafooyin dabiici ah, gadood, cudurro faafa iyo xasilloonidarro dalka qalalaase gelisa, dammaanadaha ku cad qodobbada 13, 15, 20, 21, 22, iyo 23 si ku meelgaar ah waa loo laali karaa.
Inta aan la gudo gelin doorashooyinka waa inuu jiro sharci gaar ah oo lagu hagayo arrin kasta oo la xariirta doorasho dimuqaraadi ah.
Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya qaab-dhismeedka Xafiiska Garyaqaanka Guud iyuo Shuruudaha looga baahan yahay hawlwadeenadiisa.
Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya dhismaha iyo waajibaadka ciidan kasta. Bannaanbaxyada waxaa lagu joojin karaa sababo lid ku ah Diinta Islaamka, caafimaadka, anshaxa, amniga iyo xasilloonida dalka. Faroole ayaa Isimada Puntland oo madasha fadhiyey u sheegey in aysan shaqo ku lahayn dastuur, uusanna jirin dastuur la badali karo, iyo kuraas baarlamaan oo la kordhin karo.
Ma jiri karo xeer ka horimanaya sharci Golaha Wakiilladu gudbiyeen. Aasaasidda ururadu waa inay waafaqsan yihiin qaanuunka dalka iyo danaha ummadda Puntland. Xafiiska uu qoraalka cabashadu u socdo waa inuu ka jawaabo 45 beri gudahood. The 6’2 forward was selected with the first pick of the second round 13th overall and is the first Somali to be drafted in the WNBA.
Si loo hirgeliyo baahinta maamulka Dawladda, dalku wuxuu u qaybsan yahay gobollo iyo degmooyin.